You are here: Home / Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah
The Planet Fixer Digest ("Mashruuca Fikradaha Fixinta") Wuxuu ka shaqeeyaa Qorshaha Fikradaha Fikradaha iyo wuxuu ku shaqeyn karaa bogag kale. Waa Qorshaha Fikradaha Fiktoorka Digic ee ah inuu ixtiraamo asturnaantaada wixii macluumaad ah ee aan soo ururin karno inta aan ku shaqeyneyno boggayaga internetka.
Sida shabakadaha intooda badan, Qorshaha Fikradaha Fixinta ayaa soo ururiya macluumaad aan shakhsi ahaan loo aqoonsan yahay nooca caanaha dukumiiyeyaasha iyo server-yada sida caadiga ah ka dhigaan, sida nooca browserka, doorbidka luuqada, goobta loo diro, iyo taariikhda iyo waqtiga codsadaha booqdaha. Ujeedada Qorshaha Fixinta Digicer-ka ee ururinta macluumaadka aan shakhsiga ahayn ee aqoonsiga ah waa in si ka wanaagsan loo fahmo sida ay u socoto Qorayaasha Fixer Digest's booqdayaashooda. Mararka qaar, Qorshaha Fikradaha Fiktoorku wuxuu sii deyn karaa macluumaad aan shakhsi ahaan loo aqoonsanayn wadar ahaan, tusaale ahaan, isagoo daabacaya warbixin ku saabsan isbeddellada isticmaalka boggeeda.
Qorshaha Fikradaha Fixerka wuxuu sidoo kale uruuriyaa macluumaadka shakhsi ahaaneed ee aqoonsiga sida Internetka (IP) cinwaanka loogu talagalay dadka isticmaala iyo kuwa isticmaala iyaga oo ka tagaya faallooyin ku saabsan Qorshaha Fikradaha Qorayaasha Digestooyinka / goobaha. The Planet Fixer Digest ayaa kaliya oo muujinaya cinwaanka user iyo faallooyinka IP-ga ee xaaladaha la mid ah oo uu isticmaalayo iyo shaaca ka qaadayo macluumaadka shakhsi-aqoonsiga sida hoos lagu faahfaahiyay, marka laga reebo in faallooyinka IP-ga iyo cinwaanada emailka ay muuqdaan oo la siiyaa maamulayaasha blogga halkaas oo faallo laga bixiyey.
Dadka booqanaya qaarkood ee Shabakadda Fikroolka Digicer's website waxay doortaan inay la macaamilaan Qorshaha Fikradaha Fikradaha Munaasabadaha siyaabaha looga baahan yahay Planet Fixer Digest si ay u soo ururiyaan macluumaadka shaqsi ahaan loo aqoonsado. Xaddiga iyo nooca macluumaadka ee Qorshaha Fikradaha Fikradaha Digirta wuxuu ku xiran yahay nooca isdhexgalka. Tusaale ahaan, waxaan ka codsanaa martida kuwaas oo saxiixaya Mashruuca Fikradaha Fixinta si aad u bixiso magac iyo cinwaanka emailka. Kuwa ku hawlan macaamilka The Planet Fixer Digest ayaa laga codsanayaa inay bixiyaan macluumaad dheeraad ah, oo ay ku jiraan sida loo baahan yahay macluumaadka shakhsi ahaaneed iyo kuwa maaliyadeed ee loo baahan yahay si loo fuliyo macaamilkaas. Xaalad kasta, The Planet Fixer Digest wuxuu ururiyaa macluumaadka noocaas ah oo keliya oo ah mid muhiim ah ama ku habboon si loo fuliyo ujeeddada ka-qaybgalaha soo-booqdaha Shirkadda Planet Fixer Digest. The Planet Fixer Digest ma shaaca ka qaadin macluumaadka shakhsiyadeed ee aqoonsiga aan ahayn sida lagu sharxay hoos. Kuwa soo booqanaya mar waliba way diidi karaan inay bixiyaan macluumaad shakhsi-aqoonsi ah, oo ay ku xiran tahay inay ka hortagi karto inay ka qaybgalaan hawlaha internetka la xiriira.
Qorshaha Fikradaha Fiktooriya ayaa laga yaabaa inay ururiyaan tirakoobka ku saabsan dabeecadaha booqdayaasha boggeeda internetka. The Planet Fixer Digest ayaa laga yaabaa inay si cad u muujiyaan macluumaadkan ama siiyaan dadka kale. Si kastaba ha ahaatee, The Planet Fixer Digest ma shaaca ka qaadin macluumaadka shakhsiyadeed ee aqoonsiga aan ahayn sida lagu sharxay hoos.
Qorshaha Fikradda Fixinta Dhiirrigelinta ayaa shaaca ka qaadaya macluumaadka shakhsi ahaaneed ee aqoonsashada iyo shakhsiyaadka aqoonsiga oo keliya oo keliya shaqaalaha, qandaraaslayaasha iyo ururrada la xariira ee (i) u baahan yahay in la ogaado macluumaadkaas si loo hirgeliyo on Planet Fixer Digest ama bixinta adeegyada at The Planet Fixer Digest ee website, iyo (ii) in ay isku raaceen in aan u sheegin dadka kale. Qaar ka mid ah shaqaalahaan, qandaraaslayaasha iyo ururrada la xiray ayaa laga yaabaa inay ku yaalaan meel ka baxsan wadankaagii hooyo; adoo isticmaalaya website-yada Planet Fixer Digest, waxaad ogolaaneysaa wareejinta macluumaadka noocaas ah iyaga. The Planet Fixer Digest ma kireeyo ama iibin karto shakhsi-aqoonsi ahaan shakhsi ahaan aqoonsashada iyo shakhsi ahaan aqoonsashada macluumaadka qof kasta. Qorshaha Qorshaha Fixinta ee Qorshaha Fikradaha Fiktoorka wuxuu shaaca ka qaadaa macluumaadka shakhsi ahaaneed ee aqoonsashada iyo shakhsiyaadka aqoonsiga oo kaliya marka laga jawaabayo amar maxkamadeed, amar maxkamadeed ama codsi kale oo dawladeed iimaan wanaagsan oo muujinaysa in siideynta lagama maarmaan u tahay ilaalinta hantida ama xuquuqda Qorshaha Fikradaha Fikradaha, qaybaha saddexaad ama dadweynaha oo dhan. Haddii aad tahay qof diiwan gashan oo ka mid ah bogga Fikradaha Fikradaha Digfeerka iyo bixiyay cinwaanka emailkaaga, Qoraalka Fikradaha Fixer wuxuu marmar kuugu soo diri karaa email si uu kuu kuu sheego waxyaabaha cusub, ka jawaab celintaada, ama kugula socodsiiya wixii iyada oo la socota Planet Fixer Digest iyo alaabooyinkeena. Haddii aad noo soo dirto codsi (tusaale ahaan email ahaan ama mid ka mid ah hababka jawaab-celinta), waxaanu xaq u leenahay inaanu daabacno si aanu nooga caawino inaanu caddayno ama ka jawaabno codsigaaga ama nagu caawino inaan taageerno dadka kale. Qorshaha Fiktoorka Fixinta wuxuu qaadaa dhammaan tallaabooyinka si macquul ah lagama maarmaanka u ah in laga ilaaliyo helitaanka aan la oggolayn, isticmaalka, isbeddelka ama burburinta shakhsiyaadka-aqoonsi ahaan shakhsi ahaanta aqoonsanaya iyo shakhsi ahaan aqoonsashada.
Macmiilku waa xayeysiis macluumaad ah in website uu ku dukaamaysto kombiyuutarka booqdaha, iyo in browserka booqdaha uu siiyaa bogga mar walba soo booqdaha. The Planet Fixer Digest wuxuu u adeegsanayaa cookies si uu u caawiyo The Planet Fixer Digest oo tilmaamaya iyo booqashada martida, isticmaalka website-ka Planet Fixer Digest, iyo boggooda doorbidooda. Qorshaha Fikradaha Fikradaha Digfeerka ah ee aan rabin in la helo cookies oo lagu rakibo kombiyuutarkooda waa inay dejiyaan dookhooda si ay u diidaan cookies ka hor inta aan la isticmaalin bogagga shabakadda Fiktoor Fixer Digest, oo ay ku jiraan dhibaatooyinka qaarkood ee bogagga shabakadda Fikradaha Fixer Digest si aan si wacan u shaqayn Kukiyada.
Haddii Qorshaha Fikradaha Fiktoorka, ama macaamil ahaanba dhammaan hantidiisa, ayaa la helay, ama dhacdo aan caadi ahayn in Qorshaha Fikradaha Fiktoorku uu ka baxo ganacsiga ama uu soo galo bangiyada, macluumaadka isticmaale ahaan waxay noqon doontaa mid ka mid ah hantida lagu wareejiyo ama lagu helo saddex meelood xisbi Waxaad qiraysaa in wareejinta noocaas ahi ay dhici karto, iyo in qof kasta oo iibsadaha ah ee Qorshaha Fiktoorka Fixerka sii wadi karo inuu isticmaalo macluumaadkaaga shakhsiyeed sida ku cad siyaasaddan.
Xayeysiisyada ka muuqda mid kasta oo ka mid ah boggayaga internetka ayaa laga yaabaa in loo gudbiyo dadka isticmaala xayeysiiska xayeysiiska, kuwaas oo laga yaabo inay sameeyaan cookies. Kukiyadaas waxay u oggolaanayaan server-yada inay u aqoonsadaan kombuyuutarka mar kasta oo ay kuu soo diraan xayeesiin online ah si ay u ururiyaan macluumaadka ku saabsan adiga ama kuwa kale ee isticmaala kombuyuutarkaaga. Macluumaadkani wuxuu u ogolaanayaa shabakadaha xayeysiiska, waxyaabo kale, in la keeno xayaysiisyo bartilmaameed ah oo ay rumaysan yihiin inay aad u daneynayaan. Nidaamkan Qarsoodiga ah wuxuu daboolayaa isticmaalka cookies by The Planet Fixer Digest iyo ma daboolin isticmaalka cookies by xayeysiiye kasta.
Inkastoo isbeddelada badankooda ay u muuqdaan kuwo yar, Qorshaha Fikradaha Fixinta wuxuu u beddeli karaa Nidaamkiisa Khaaska ah waqti ka waqti, iyo Qorshaha Fikradaha Fixinta Digest. The Planet Fixer Digest wuxuu dhiirigeliyaa dadka soo booqda inay si joogta ah u eegaan boggan wixii isbeddel ah ee Siyaasadda Khaaska ah. Haddii aad haysato koontada Qorshaha Fikradaha Fikradaha, waxaa laga yaabaa inaad sidoo kale hesho wargalin ku saabsan isbedeladaan. Isticmaalkaaga sii socota ee boggan ka dib is-beddel kasta oo ku yaalla Siyaasaddaan Khaaska ah waxay noqon doontaa aqbalaaddaada isbedelkaas.